Gwara rekutsanangudza neakanakisa madhiragi iOS 13 - Chikamu III | IPhone nhau
Gwara rekutsanangudza neakanakisa iOS 13 hunyengeri - Chikamu chechitatu
Isu tinoenderera mberi nemazita ezhizha ekugadzirira iOS 13 uye kusvika kwayo pakati paGunyana. Ichi chatova chikamu chechitatu chemazita edu anonongedza angakubvumidze kuti ushandise zvakanyanya kuita kwako kwe iPhone nekuda kwezano ratiri kuzokupa. Uye, sezvazvinowanzoitika, kuburitswa kwese kweIOS kune zvakawanda zvidiki diki zvisina kutaurwa mumazita ezvikonzero zviri pachena. Isu tinokuratidza kuti ndeapi akanakisa manomano uye mashandiro aungave iwe usina kuziva nezve iOS 13 uye izvo zvinokutendera iwe kusvina yako iPhone, uzviwanire pamwe nesu.
Chinhu chekutanga chandinokusiira pano ndeche mavhezheni maviri apfuura egwara iri, uye ndeyekuti yega yega yavo inogara nhamba yakanaka yemamwe mashoko iwe yausingafanire kupotsa:
Iyo yakatarwa gwara ine akanakisa iOS 13 manomano - Chikamu I
Iyo yakatarwa gwara ine akanakisa iOS 13 madiki - Chikamu II
Kana iwe watoverengera kare, Ino inguva yekupinda ino yechitatu gwara uine zvimwe zvinhu zvausingazive. Nekudaro, isu tinotora mukana wekukuyeuchidza kuti pane yedu YouTube chiteshi isu tine nhamba yakanaka yezvidzidzo zvaunogona kuona nenzira inonakidza uye yakapusa (LINK).
1 Maitiro ekubatanidza maviri mahedhifoni eBluetooth panguva imwe chete
2 Raira zviyeuchidzo zvakawanda kuna Siri kamwechete
3 Bvisa mafoni kubva kunhamba dzisingazivikanwe
4 Apple Mepu Nguva ine yayo yega «Street View»
Maitiro ekubatanidza maviri mahedhifoni eBluetooth panguva imwe chete
Iko mukana wekubatanidza akati wandei mahedhifoni eBluetooth panguva imwe chete yaive yatovepo kwenguva yakati mune yakanaka nhamba yemidziyo yeApple, Nekudaro, yakanga isiri kusvika kusvika kweIOS 13 kuti iyo iPhone yaibvumidzwa kuyerera kurira kune maBluetooth mahedhifoni panguva imwe chete. Sezvinotarisirwa, kushanda uku kunogumira kumidziyo kubva kukambani yeCupertino (yazvino) yakadai seBeats neAirPods, zvisinei, hazvingagone kuve nyore kune vashandisi vaviri kunakidzwa nenziyo imwechete neiyo imwe inoburitsa iPhone.
Kuti zviite kuti zvive nyore zviri nyore, kana tiine mushandisi ane mamwe maAirPod muFamily system kana akawedzerwa kune vanobata, patinodzvanya paControl Center> AirPlay, maAirPod edu neavo veshamwari yedu kana nhengo yemhuri vanofanirwa inoratidzwa panguva imwe chete. Izvi zvinoitika futi kana mamwe maAirPod ari edu. Kana mamwe mahedhifoni aunoda kubatanidza asingaonekwe muAirPlay, ingoatangazve uye uabatanidze kuburikidza neyekugadzika kweBluetooth kune yako iPhone. Kubva panguva iyoyo unogona kugadzirisa vhoriyamu uye kutamba wega wega wega wega wega weBluetooth mahedhifoni Kunyangwe kana iri chete iPhone iri kuburitsa ruzha semuenzaniso kubva kune yekushandisa mimhanzi kana iyo iPad mauri kutarisa bhaisikopo. Iri nyore uye rakanaka basa.
Raira zviyeuchidzo zvakawanda kuna Siri kamwechete
Imwe yemabasa nyeredzi yaSiri ndeyekunyora pasi zviyeuchidzo, zvirinani ndiko kushanda kwandinoshandisa zvakanyanya, nekuti mune mamwe masimba hakusi kuti kwakanyanyisa kuzvimiririra. Dambudziko raive rekuti kusvika parizvino patakagadzira zviyeuchidzo kana tikazvitumidza zvese mumutsara, Siri akagadzira chiyeuchidzo chimwe chete kwatiri umo maakaronga rondedzero yadzo.
Iye zvino neIOS 13 Siri ichatibvumidza isu kugadzira runyorwa rweakasiyana, akapatsanurwa uye ega zviyeuchidzo kuburikidza neyakaenzana odhiyo. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuti "... uye" pakati pechiyeuchidzo uye chiyeuchidzo, semuenzaniso: Siri, gadzira chiyeuchidzo chemangwana nenguva dza10: 00 inonzi "kusangana naboss" uye na11: 00 "enda kunotenga." Mune dzidziso, ndiko nyore kwazvo kugadzira akateedzana ezviyeuchidzo zvemumwe kuburikidza naSiri nekukurumidza uye nyore. Chokwadi ndechekuti kusvika pari zvino kugona uku kunoshanda muChirungu asi kwete zvakanyanya muchiSpanish.
Bvisa mafoni kubva kunhamba dzisingazivikanwe
Hapasisinazve kukanganisa kushambadzira kufona uye zvese zvisina maturo izvo zvinopedza nguva uye zvinotisimbisa panguva isina kukodzera. iOS 13 ikozvino inosanganisira mukana wekunyaradza mafoni ese atinogamuchira kubva kunhamba dzisingazivikanwe, pasina chakasarudzika, imwe neimwe yekufona iyo yatinogamuchira ichaenda yakananga kubhokisi redu rezwi retsamba kana isu takaita kuti riitwe, kana ivo vanozorembera zvavo pasina iPhone yedu kurira.
Zvisinei, Uku kushanda kunewo chinhu chisina kunaka, uye ndiko kuti kuchanyaradza mafoni ese anouya kubva kune vatinosangana navo atisina kuwedzera mubhuku renhare, Uye izvi zvinogona kunyanyisa kunyanyisa sezvo isu tinogona kurasikirwa nhare kubva kune vatengi kuti isu hatina vanobatana, kubva kuchipatara kana kubva kune yeruzhinji sangano rinoda kutibata. Ivai chero zvazvingava, zviri pachena kuti iko kushanda kuti kuve kwakakwaniswa uye kuti hazvikurudzirwe kuti ugare uchinge waitwa nekumisikidza, asi inogona kuuya inonyatso batika kune iwo makesi mairi atinoda kuwedzera kumisikidzwa uye isu haikwanise kubhadhara zvinokanganisa, kunyange zviri izvo izvo nzira yekusakanganisa, handiti?
Apple Mepu Nguva ine yayo yega «Street View»
Apple Mepu inogara iri kumashure kweGoogle Mepu, izvi hazvidzivirirwe uye ndeyekuti iyo Google hombe iyo inogona kubata huwandu hweruzivo hwakakosha uye hunoshanda kupfuura iyo Apple. Kunyange zvakadaro, Iyo Cupertino firm inoisawo kuyedza kwayo mukuita kwayo mepu uye yekufambisa system ishande zvakanaka, Saka ikozvino ivo vawedzera mashandiro anoita zvine musoro chokwadi chekuti nguva pfupi yadarika tanga tichiona mota zhinji dzeApple Mepu dzinofamba mumigwagwa yedu kutenderera pasirese.
Apple yakawedzera yayo "Street View" kuApple Mepu, Iko kugona kunotibvumidza isu kufamba nenzira imwe chete pamepu ye2D uye inotitaridza kuratidzwa kwemigwagwa. Panyaya yemhando yemufananidzo, manejimendi manejimendi uye kufamba, chokwadi ndechekuti Apple yaenda kurudyi kuGoogle Street View, zvisinei, izvozvi zvinongogoneswa muSan Francisco kunyangwe zvichitarisirwa kuti mumwedzi iri kuuya ichawedzera nzira inoshamisa huwandu hwemaguta nemigwagwa inowanikwa mune ino sisitimu ndiyo yekutanga nhanho usati wafambisa kuburikidza neAugmented Reality.
Iwe unoziva, kana iwe uchida kutiudza isu mamwe manomano kana uine zvako kusahadzika, usakanganwa kuti isu tine bhokisi rehomwe kwatinogona kugadzirisa chero nyaya uye nekudaro upe rumwe ruzivo kune iyo iPhone News nharaunda chero paunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Gwara rekutsanangudza neakanakisa iOS 13 hunyengeri - Chikamu chechitatu
Muna 2021 Apple yaigona kuvhura iPhone ine chigunwe cheminwe pasi pechidzitiro
Apple haizoshandure mitengo yezvigadzirwa zvayo nekuda kwemitero yaTrump